होटलहरू पनि अजिब अजिबका हुन्छन् । हामीलाई थाह छ कि होटल हरुले विशेष गरेर विभिन्न प्याकेजहरु अफर गरेर ग्राहकहरुलाई लोभ्याउने गर्दछन्। कुनै होटलले हनिमुन प्याकेज अफर गरेर दम्पतीहरूलाई लोभ्याइरहेका लोभयाउने गर्दछन् । तर नेदरल्यान्ड्सस्थित एउटा होटल भने अनौठो र अचम्मको छ । यसले चाहिँ दम्पतीको पारपाचुके गराउँछ । यसको नामै छ– डाइभोर्स होटल डटकम । तलाकका लागि आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था तयारी हालतमा राखेको एक मात्र होटल ।
पुरै पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
Posted by Ramesh0PostaComment
एप्पलले ल्याउँदैछ आइप्याड एयर-टू
एप्पलका फ्यानहरु आइफोन सिक्सको व्यग्र प्रतिक्षामा रहेका बेला नयाँ खबर सार्वजनिक भएको छ । एप्पलले नयाँ आइफोन सार्वजनिक गरे लगत्तै नै नयाँ आइप्याड निर्माण गर्ने समाचारहरु सार्वजनिक भएका हुन् ।
कोरियाली समाचार माध्यमहरुका अनुसार एप्पलले यो महिनाको अन्त्यतिरै नयाँ पुस्ताको आइप्याड एयर -आइप्याड एयर टू) निर्माण सुरु गर्नेछ । यसका पार्टस् निर्माता तथा आपूर्तिकर्ताहरु तयारीमा जुटिसकेका बताइएको छ ।
Posted by Ramesh3PostaComment
मोबाइल उठाउँदा एक रुपैयाँ कमाइ
मोबाइलको घन्टी बज्दा फोन उठाएकै भरमा खातामा खुत्रुक्क एक रुपैयाँ जम्मा हुन्छ भने त्योभन्दा सजिलो आम्दानी अर्को के होला? कुरा यत्ति हो, फोन उठाउनुअघि ६ सेकेन्डसम्म कुनै व्यापारिक विज्ञापन हेर्ने धैर्य तपाईंमा हुनुपर्छ। हो, सिरान टेक्नोलोजीले 'क्यास अन एड' नामक मोबाइल एप्लिकेसन निर्माण गरेको छ, जसको प्रयोग गरेर अहिले सित्तैमा उठाइरहेका फोन कलबाट बसीबसी आम्दानी गर्न सकिन्छ। त्यो पनि प्रत्येक कलमा एक सेन्ट, जुन अहिले डलरको भाउ बढेकाबेला एक रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ।
Posted by Ramesh 10 PostaComment
Posted by Ramesh2PostaComment
Posted by Ramesh 1 PostaComment
हे भगवान यो त मेरो कम्प्युटरको हार्ड डिस्क भन्दा पनि धेरै क्षमताको रहेछ !!!
यो कुनै जोक हैन, Kingston कम्पनीले विश्वकै पहिलो 256 GB क्षमताको USB flash Drive निर्माण गरेको छ । DT300 नामक यो USB Flash Drive को Transfer rates 20MB per second read र 10 MB Per second write रहेको छ । के तपाईंलाई थाहा छ 256 GB भनेको कती धेरै space हो ? एक चोटि अरु सँग तुलना गरेर हेर्ने हो कि ?
Posted by Ramesh6PostaComment
एमेजनबाट प्रकाशित किताब भन्ठानेर यसरी झुक्कियो ‘कान्तिपुर’